पहिला राष्ट्र, त्यसपछि राजनीतिक दल, अनि मात्र सत्ता हो— डाक्टर रामबरण यादव, पूर्वराष्ट्रपति – Maitri News
२०७२ साल असोज ३ गते तत्कालिन राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादवले जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको ‘नेपालको संविधान–२०७२ संविधानसभाबाटै घोषणा गर्दै गरेको दृष्य देख्दा देश–विदेशमा रहेका आम नेपाली हर्षविभोर भएका थिए । संविधानसभाका ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनसहित नयाँ बानेश्वरको तत्कालिन संविधानसभा भवनबाट संविधान जारी हुँदै गर्दा संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारीसहित सिंहदरबार छिरेका जनप्रतिनिधि भावविभोर भएका थिए भने देशभरी दीपावली भएको थियो । आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट जारी भएको संविधान हेर्ने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको चाहनामा पहिलो संविधानसभा विघटन भएसँगै तुषारापात भएको थियो । जब दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो त्यसपछि नेपाली जनताले उत्साहको स्वास त फेरे तर, संविधान कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने संसय पनि नेपाली जनतामा त्यत्तिकै रहिरयो ।
संविधान जारी भएको तीन दिन पनि वित्न नपाउँदै दक्षिणी छिमेकी भारले नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । भारतले नाकाबन्दी लगाएसँगै एक पटक फेरि नेपाली जनतामा २००७ देखि भएका सबै आन्दोलनको उपलव्धीलाई समेत संस्थागत गर्दै २०६५ साल जेठ १५ गते घोषणा भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले चिमोटी रह्यो ।
त्यसैबेला तक्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहनु भएका केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो । आम नेपालीलाई चिमोटिरहने त्यो चिन्ताका सहयात्री बन्नुभएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली भारतीय नकाबन्दीका सामू शक्तिशाल जस्तै भनेपछि अन्ततः भारतले लगाएको नकाबन्दी २०७२ माघ २५ मा अन्त्य भयो र नेपाली जनताको मुहारमा फेरि उत्साह छायो । राष्ट्रवादी नेता ओली एकाएक राजनेताका रुपमा दरिनुभयो । अहिले त्यही तीन वर्ष अघि जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ । यही विषयमा केन्द्रित भएर संविधान घोषणा गर्नेबेलाका राष्टपति डाक्टर रामबरण यादवसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
तीन वर्ष अघि तपाईँले नै घोषणा गर्नुभएको संविधान अहिले कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ । संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा असोज ३ गते देशभरी नै दीपावली भयो । तपाईँ आफैँले चाहिँ कस्तो महशुस गरिरहनु भएको छ ?
म आफैँ पनि संविधान जारी भएको दिनको सम्झना गर्दा भावुक बनेको छु । संविधान जारी भएको दिनको सम्झना गर्दै म आज पनि खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु । निकै ठूलो बलिदान र संर्घषपछि यो हामीले त्यति ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका हौँ । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु आम नेपालीका लागि निकै ठूलो गौरव र खुशीको कुरा हो । अझ मैले मेरो हातबाट नेपाली जनताको सामुन्नेमा संविधान जारी गर्ने मौका पाएँ । त्यो खुशी अझ बढी छ । संविधान घोषणा गर्दै गर्दा पनि मलाई सबैको सहमति जुट्न सकोस् भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ । मैले त्यसका लागि निकै ठूलो प्रयास पनि गरेको थिएँ । तर, अपेक्षा अनुरुपको सहमति जुट्न सकेन । सबैको सहमति जुट्न सकेको भए त्यतिबेला अझ धेरै खुशी हुने थिएँ ।
अहिले त त्यतिबेला असहमति गरेका दलहरु प्नि सहमतिमा आएका छन् । संविधानको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने केही राजनीतिक दल पनि अहिले सरकारमा सहभागी छन् । त्यसमा त खुशी हुनुहुन्छ होला नि ?
म अहिले धेरै खुशी छु । अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो खुशीको कुरा हो । अहिले संविधान सबैका लागि सर्वस्वीकार्य दस्तावेजका रुपमा विक्षित हुने देखिएको छ । यो सन्तोषको कुरा हो मेरा लागि र सबै देशवासीका लागि पनि । आज मधेस केन्द्रित भनिएका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) त्यतिबेला संविधानको विरोधमा थिएँ । उनीहरुले त्यो संविधानलाई स्वीकार गरेका थिएनन् । म मधेसको समस्या पनि संविधान जारी भएसँगै समाधान होस् भन्नेमा थिएँ । तर, संविधान जारी हुँदा मधेस केन्द्रित दलको असहमति रहँदै गर्दा मलाई पनि केही असजिलो भएको थियो । त्यसकारण पनि म भावुव भएको थिएँ । मधेस देश भित्र छ । मधेसको समस्या आफ्नो देश भित्रको समस्या हो । मधेसको समस्या आन्तरिक समस्या हो भन्नेमा म थिएँ । हामी आफैँले आफ्नो भू–राजनीतिक समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा थिएँ र अहिले पनि छु ।
मैले अघि पनि भने । अहिले समस्या विस्तारै हल हुँदै गएको छ । सबैले संविधानलाई केही असहमतिका बीच पनि स्वीकार गरेको अवस्था छ । यो संवैधानिक विकासका लागि ठूलो उपलब्धि पनि हो ।
अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एउटै पार्टी बनेका छन् । उनीहरुकै नेतृत्वमा सरकार छ । बाँकी केही समस्या पनि यही सरकारका पालामा हल होला भन्ने चाहिँ कत्तिको विश्वस्थ हुनुहुन्छ ?
अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारले मुलुकको नेतृत्व गरेको छ । त्यही सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम पनि सहभागी छ । राजपाले पनि सरकारलाई समर्थन दिएको छ । त्यसैले यो अवसरलाई संविधानले निदृष्ट गरेको प्रक्रियाबाट सबै समस्याको हल गर्नुपर्छ । यो भयो भने मात्र संविधानको सार्थकता हुन्छ र संविधान पनि दीर्घायू हुन्छ । संविधानमा थप सुधार परिमार्जनका लागि अहिले माहोल भनेको छ । यो अर्को ठूलो अवसर हो । यसको सदुपयोग सरकार र संशोधनको माग गरेका दलहरुले गर्नुपर्छ र गर्न सकुन् भन्ने मेरो चाहना छ । सरकारलाई समर्थन र सहमतिको वातावरण पनि बनेको छ । यो नेपाली जनताले नियाली रहेका छन् । यो जिम्मेवारी पनि अहिलेको सरकारको काँधमा आएको छ । संविधानमा भएका असन्तुष्टि र गुनासाहरुको सम्वोधन गर्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधानको कार्यान्वयन हुँदै जान सकोस् मेरो यही चाहना छ ।
तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनौति पनि त त्यत्तिकै छ नि, होइन ?
निश्चय पनि निकै चुनौति छन् । अहिले पनि कतिपय कानुन बन्न नै बाँकी छ । अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार बनेको छ । यसमा हतार नगरी राम्ररी कानुन बनाएर दीर्घकालिन रुपमा पनि सजिलो हुने गरी अघि बढ्नु पर्ने जिम्मेवारी पनि यो सरकारको काँधमा छ ।
अब त खासै बाधा नहोला नि ?
हो, यो संविधान लोकतान्त्रिक छ, समावेशी छ । मिश्रित प्रणालीलाई अपनाएको छ । हामीले विश्वको लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर संविधान भएका छौँ । तर, यसमा सन्तुलन कायम राख्ने कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । संविधान जारी गर्दा नेपाली काँग्रेस, तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पनि सहमति थियो । त्यसैबेला पनि मैले समावेशी राज्य निर्माणको चुनौति छ भनेको थिएँ । अहिले ती धेरै कुरा हल हुँदै गएका छन् । हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थासहितको संविधान भनेका छौँ । हामीले यही लोकतान्त्रिक संविधानमार्फत समाजवादमा पुग्नुपर्छ । यस कुरामा पनि राजनीतिक दलहरुको ध्यान जान सकोस् भन्ने मेरो कामना छ । लामो संघर्षपछि प्राप्त यो संविधान कार्यान्वयन होस भन्ने आम नेपालीको पनि चाहना छ । यो संविधान सफल होस् र नेपाली जनताले शान्ति, स्थीरता र विकासमा आम नेपाली अघि बढ्न सकुन भन्ने पनि मेरो कामना छ ।
तपाईँ पूर्व राष्ट्रपति नेपाल देशको अविभावक पनि हुनुहुन्छ । अहिले जुन अवसर नेपाली जनताले प्राप्त गरेका छन् । त्यसबाट खुशी नै हुनुहुन्छ होइन त ?
यो अवसरबाट दुःखी हुनुपर्ने कारण मैले देखेको छैन । हामीले धेरै अप्ठ्यारालाई पार गरेर यहाँसम्म आएका छौँ । अहिले सरकारमा रहेका दल, विपक्षी दल, पत्रकार, मानवअधिकारवादी सबैले ‘वाच डग’को भूमिका खेल्नुपर्छ । देशलाई आर्थिक विकासको दिशामा अघि बढाउनुपर्छ । हामीसँग यो बाहेक विकल्प नै छैन । अहिले हामीले आशा नै आशा बाहेक निरासा देख्ने ठाउँ नै छैन । म फेरि पनि भन्छु । सबैले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । नेपाली जनता अहिले निकै धेरै सचेत भएका छन् । कसैले गल्ती गर्यो भने जनताले नै सजाए दिन्छन् । त्यसैले कसैले पनि अहंता राख्नु हुँदैन । सबैले धेरै ठूलो छाती बनाएर, सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ । हामी सबैले कानुनी राज्यको मान्यतालाई शीरोधार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । हामीले सबै विविधतालाई जोड्दै अघि बढ्नुपर्छ । पहिला राष्ट्र हो । त्यसपछि राजनीतिक दल हो । त्यसपछि मात्र सत्ता हो । हामीले यो कुरालाई पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।
तपाईँ तराईमै जन्मिनुभयो, हुर्किनुभयो । त्यहीँको राजनीतिबाट माथि उठ्नु भयो । समग्र मुलुकको राष्ट्रपति हुनुभयो । अहिले तराई र पहाडको खाडल पनि देखिएको छ । यो सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?
म तराईवासी भए पनि एउटा नेपाली नागरिक हुँ । हामी सबै नेपाली हुँ । हामीले यही भावना अनुरुप अघि बढ्न सक्नुपर्छ । हामी सबै नेपाली भएर बाँच्न सकौँ । सबै नेपालीको जय होस् ।
Previous Previous post: चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न उपराष्ट्रपति पुनको आग्रह
Next Next post: dishome